GEEDKA CANABKA AHNA WUXUU U YAHAY DHIB XAGGA QORRAXDA IYO CADCAD - BEERTA
Waxaan si madax banaan u samayn karnaa geedka canabka ah
Eegista lakabyada buuxa ee miisaanka cagaarka cagaaran ee caleemaha, ku dhawaad ​​ninkii beerta ka shaqeeyaa ma rabo oo kaliya inuu ku raaxaysto dhadhanka cajiibka ah ee berry, laakiin sidoo kale inuu koro muraayaddiisa. Xitaa guuleyste aan la ogaan karin ayaa sidan samayn kara.
Geedka canabka ah - geed canab ah, oo lignified, laakiin jilicsan, afkoda iyo fidiyo qorraxda.
Iskuxirlayaasha isku dhafan ee guga ayaa siinaya caleemo dhalinyaro ah, oo lagu magacaabo geed canab ah, kuwaas oo burushyada qorraxda qorraxda-qoyan, miro iyo miro madow ah ayaa la sameeyay. Waxaa xusuus mudan in ay tahay caleemaha yar yar ee midho dhaliya.
Xilliga xagaaga, kobcintoodu waxay ku dhowaad 3 mitir, sidaas darteed abuuritaanka baadiyaha waa hawl degdeg ah ee beerta.
Iyada oo habka ku haboon ee hawlgalka iyo daryeelka wanaagsan, baadiyaha saddex sano ah horey u bixiyaan goosashada buuxda.
Tiknoolajiga manjooyin wuxuu soo jeedinayaa in aan ka badnayn 5 buro on laanta dhinaca ee dayrta, iyo guga waa inay kaliya ilaaliyaan caleemaha yar yar iyo sare. Dhamaan kuwa kale waa la saaraa, haddii kale baadiyaha sii xajin doonaa, iyo berry noqon doonaa kuwo yaryar oo aan qallafsaneyn.
Canabku ma aha mid si gaar ah ugu soo kabanaya ciidda koritaanka, iyo beeraha canabka ah waa la burburiyaa xitaa meelaha qoyan, marka laga reebo isticmaalka saline kaliya.
Waa muhiim markaad dooranayso goobta saxda ah, sababtoo ah dalagga hodanka ah ayaa laga saaraa qorraxyada qoraxda koonfurta iyo koonfur bari.
Meelaha hoose ee jiifka waa in laga fogaadaa, maadaama ay jirto suurtogalnimada sare ee fogaanta iyo hawo qaboobka qabow.
Wax kasta oo aad u baahan tahay for geedka canabka ah:
hawo wanaagsan oo u dhexeeya saf canabkiinna;
illaalinta ugu badan;
kuleylka wanaagsan ee ciidda.
Tilmaamo xiiso leh canab soo beertay xilliga dayrta.
Baro bacriminta canabkiina udubka ah: //rusfermer.net/sad/vinogradnik/uhod-za-vinogradom/luchshie-vidy-udobreniya-dlya-maksimal-nogo-plodonosheniya-vinogradnyh-kustv.html.
Akhri halkan ku saabsan beerista Badana.
Geedka canabka ah, sida dhammaan xubno ka mid ah dunidan dhirta, waxay leedahay qayaxan u gaar ah waraabinta. Waxay si toos ah ugu xiran tahay qoyaanka ciidda iyo xaddiga roobabka.
Sida caadiga ah, carrada ciidda waxay tusinaysaa inta jeer ee 7-10 maalmood, dhoobo iyo carro madow - ilaa 14 maalmood.
Si wadajir ah ula waraabiyo, waxaa lagu talinayaa in lagu quudiyo nitrogenous, fosfooraska-potassium Bacriminta, waxaa loo isticmaalaa saddex jeer xagaaga.
Bacriminta macdanta ayaa lagama maarmaan u ah horumarka iyo fruiting ee dhirta, laakiin ciidda waxay sidoo kale u baahan tahay daryeel: qaabeynta iyo soo celinta biosenosis.
Arrinta dabiiciga ahi waxay ka caawin kartaa sidan: humus, shimbirta dhoobada, peat ama compost.
Dhaqdhaqaaqyada asalka ah ee xoolaha, sida cagaarka, waxaa lagu sameeyaa si khaas ah xaalad dhadhan leh.
Waajib ku ah daryeelka ee geedka canabka ah iyo hababka guud: dhirta si taxadar leh, looshaqeyn nidaamsan iyo daaweynta waqtigeeda leh habka looga hortago cudurrada iyo cayayaanka.
Waxaa muhiim ah in la helo gabal cayayaanka aan loo baahnayn waqtigii loogu talagalay soo-saarka la filayo, sababtoo ah labo kaliya oo ka hadhay baadiyaha waa in la horumariyo duurka.
Tan waxaa lagu sameeyaa adigoo gaaraya 2-3 cm oo caleemo ah. Gooyo xilligan sanadka waxa ay fulinaysaa laba hawlood: talaabada xigta ee naqshadda baadiyaha iyo u diyaarinta jiilaalka.
Maqnaanshaha jirridda beerta beertii canabka ahayd - iskudhaf adag oo dhirta - waxay ka dhigeysaa inay lagama maarmaan tahay in la isticmaalo qaabdhismeed dabiici ah loo abuuray ama si loo abuuro qalab trellis ah oo noocyo kala duwan ah.
Marka la isticmaalayo ikhtiyaarka labaad, garter guga wuxuu keenaa foorar xooggan oo ah geed canab ah oo ku yaala aagga boogta koowaad ee sameynta jirro xooggan meeshan meeshan. Wuxuu noqon doonaa sannadka soo socda canabkiinna miraha ah.
Waxaan ku talineynaa akhrinta: Irises, beerashada iyo daryeelka.
Waxyaabaha qarsoodiga ah ee lupin lupin //rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/posadka-i-uhod-za-neobyknovennym-tsvetkom-lyupinom.html.
Xeerarka qaboobaha geedka canabka ah
Badanaa dhammaadka bisha Oktoobar meelaha ay jiilaalka keenayso barafka iyo barafka, shaqadu waxay ka bilaabataa diyaargarowga canabkani xilligan adag. Badanaa waxay u waraabisay ciidda hoosteeda, waxay ku dabooshay balka, cirbadaha geed, iyo bannaanka qaar ayaa u isticmaala dhulka.
Isticmaalka rinjiga dabiiciga ahi wuxuu u baahan yahay dheecaan dheeri ah oo dheeri ah. Laakiin waxaa jira khatar dhab ah jiirka, waa in la xusuusnaado. Vines ee noocyo badan oo canab ah oo jilicsan ayaa ku xiran leh rucubyo, la dhigay galay grooves oo kaliya markaas waraabiyo.
Sidoo kale, waxay si taxaddar leh uga shaqeeyaan soo bandhigida canab kadib dhammaadkii xilliga qaboobaha. Marka hore ka saar dabaysha, rucubyo canabkihii waa laga qaaday dhulka iyo ka soo galmoodka, ka dib markii la ruxay. Kadibna waxay ku qarsoonaanayaan trellis iyo qalalan, isla waqtigaas qabanaya falal ka hortag ah ee ciidda iyo canabkiinna qudhooda.
Way ka fiican tahay in la furo canabka habeenkii ama cimilada daruuraha leh si looga hortago kulaylka iyo qalajinta. Iyo waxa ugu muhiimsan ee geedi socodkan waa in laga hortago dhibaatooyinka bararaha oo barara iyo caleemaha yar yar ee dhaxan guga.
Qoryaha potentilla waa warshad waxtar leh oo qurux badan oo dalka ka mid ah.
Enotera, beerashada iyo daryeelka http://rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/enotera-mnogoletnyaya-posadka-i-uhod-za-rasteniem.html.